စား ရကံ ကြုံလေတော့ – Hlataw.com
စား ရကံ ကြုံလေတော့
မိုးတွေအု န်းအုန်း နှင့်ရွာနေသည်။ကျူရှင်က ဆရာမ နေမကောင်း၍ မသင်တော့ ဘူဆိုလို့ စောစောပြန်လာရသည်။အိမ်ရောက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိ။ဖေဖေနှင့်မေမေက ရုံးမှပြန်မရောက်သေး။ထုံးစံအတိုင်းဆို ၅ နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တတ်သည်။ လွတ်လွတ်လပ်ရှိပြီဆိုတဲအတွေးနဲ ဧည့်ခန်း က ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင် ပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေမိသည်။တစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘယ်သူမှမရှိတုံး အော စာအုပ်တွေ အော ကားတွေ ရှာကြည့် နေရင်း လက်တစ်ဖက်က ကျနော့ လီးကြီးကိုကိုင်ကာ အပေါ်အောက် ဆွဲရင် တစ်ယောက်ထဲဇိမ်ယူနေမိသည်။ တစ်ယောက်ထဲကို့လီးကို အပေါ်အောက်ပွတ်ဆွဲနေတုံး ရုတ်တရက်တခါးဘက်လှည့်ကြည်လိုက်တော့ ဘေးအိမ်က ကောင်မလေး. ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ကျနော်ကိုကြည့်နေသည်။ ကျနော်အန့်အားသင့်သွားသည် လက်ကလဲ လီး ကို ကိုင်လျှက်။
..ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်မသိဖြစ်သွားသည် ဟာ…. သွားပြီ ဘယ်အချိန်ထဲကရောက်နေလဲ မသိဘူး. မြင်သွားပြီ ကျနော်ထူပူသွားသည်။ရှက်သလိုကြောက်သလို ပြီးတော့ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေ မှန်းမသိ။ ကမန်းကတန်းနှင့်လီးကို ဘောင်းဘီထဲပြန်ထိုးထည့် ကာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း မော့ကြည်လိုက်မိသည်။“ကောင်မလေး. နင် ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေတာလဲ.” လို့ မေးလိုက်တယ်. ကောင်မလေးလဲ သူ့မျက်လုံးက ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက မခွာဖြစ်နေတာကို မိသွားလို့ထင်တယ်. ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားပြီး. “စေါစေါကလေးမှပါ.” တဲ့… သူ့ကြည့်ရတာလဲ. ကျွန်တော့်လီးကို မြင်သွားပြီး ရင်တွေခုန်နေပုံရတယ်.. မျက်လုံးတွေကလဲ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကို ရောက်ရောက်လာတယ်… ပြောရအုံးမယ်. ကောင်မလေးက. အခုမှ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှသေးတော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို ကလေးလို့ဘဲ သဘောထားတာ. ဒီနေ့ကျမှ သေသေချာချာကြည့်မိတော့.. အားပါး အပြတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး. အရမ်းလှနေပါလား. အရပ်ကလဲ. ၅ ပေ ၅လောက်ရှိတော့ အသးဖြူဖြူ နုနုနယ်နယ်နဲ့ အရင်းကို ကြည့်ကောင်းနေတယ်.. “ဟို……..“ “ကိုကြီးဘာတွေကြည့်နေတာလဲ.” လို့ ကျွန်တော့်ကို မေးရင်း က ခေါင်းငုံ့သွားသည်။
“နင်ဘယ်သူမှတော့လျှောက်မပြောရဘူးနော်“ လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်.. သူ့ပုံကြည့်ရတာလဲ အရမ်းကို စိတ်ပါနေပုံရတာနဲ့. ကျွန်တော့ သူ့အနားကပ်သွားပြီး. တကယ်လုံးကို သိုင်းဖက်.. နှုပ်ခမ်းကို အငမ်း မရ ငုံစုပ်ပေးလိုက်တယ်.. သူက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ. တအင်းအင်းနဲ့ ငြီးနေတာနဲ့ ကျတော် သူ့ကို နရံဘက်ကိုတွန်းကပ်ပြီ အကျီကိုဆွဲမလှန်ကာ သူ့နို့လေးတွေကိုကုန်းစို့လိုက်တော့သည်။ကောင်မလေးငြီးသံလေးလိုလို အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းလိုလိုကြားလာရတယ် “ကိုကြီး သမီးကြောက်တယ်…..“ ကျနော်ဘာမှပြန်မပြော လက်နှစ်ဖက်နှင့် သူ့စကတ် ကိုချွတ်ဖို့ ဘဲကြိုးစာနေမိသည်။ “လာ အခန်းထဲသွားမယ်“ဆိုပြီး ကောင်မလေးကိုကျနော် လက်ကိုဆွဲရင်း အခန်းဘက်လျှောက်သွားတယ်။“ ဆကတ် ချွတ်လိုက်ဟာ“ ကောင်မလေးက သူ့ဆကတ်ကို သူဘာသာချွတ်ပြီး ကုတင် နားမှာရပ်နေတယ် ။ကျနော် သူ့လက်ကိုကိုင်ပြီး ကျနော် ဘောင်းဘီ အောက်က တင်းမာနေတဲ လီး ပေါ်တင်ပေးရင် လက်တစ်ဖက် က သူ့နို့လေးတွေကို ရွ၇ွလေးကိုင်ပေးလိုက်တယ်။ “ကိုကြီးကော.“ “ဟင်….. အော် အေး…..“ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချရင်းကုတင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကို ခါးကနေ ဆွဲဖက်ပြီး သူနို့လေးတွေကို ဆက်စို့ပေးလိုက်သည်။
“အင်း……..“ကောင်မလေးညည်းသံလေးနှင့်အတူ ကျနော်ခေါင်းကို ဆွဲပြီးပြန်ဖက်လိုက်တယ်။ကျနော် ကောင်မလေးကိုအိပ်ရာပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ သူ့ စောက်ဖုတ်လေး ကို အောက်ခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သာသာလေးပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နို့လေးတွေကို ဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုဖွဖွလေး ကိုက်ပေးလိုက် နဲ ကျနော် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။နောက်တော့ လက်ကို ဘောင်းဘီအောက်ထဲထိုးထည့်ပြီး အသာလေး လှန်ချ လိုက်တယ်။သူဝိုင်း ချွတ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ပေါင်လေးကားလာပြီး… “ကိုကြီး …………..“ ဆိုပြီး ညည်သံလိုလိုအားပေးသံလိုလိုထွက်လာတယ်။ကျနော်ရင်တွေထဲမှာခံစားမှုပေါင်းစုံဖြစ်နေသည် ။ခု ကျနော် လိုးဖို့ နှုးနေတာက တကယ်ကို အငုံးလေးဆိုသော အသိက ခံစားမှု အသစ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။ ကျနော် သူ့စောက်ဖုတ် ကွဲကျောင်းလေးအတိုင်း အပေါ်အောက်ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။အရည်လေးတွေ စို့ လာချင်သလိုဖြစ်လာတယ် ကျနော် လက်ခလယ်လေးနဲ ဆက်ပွတ်ပေးနေမိတယ်ပြီးတော့ လက်ညှိုးနဲလက်မပေါင်းပြီး သူ့အစိလေးကိုပါချေ ပေးလိုက်တော့ “အာ….အင်း..ကိုကြီး ..ဟာ …..အာ…..“ သူညီးသံတွေအနည်းငယ်ပိုလာသည်။
အရည်လေးတွေလဲ ပိုရွဲလာသည်။ ကျနော် လက်ခလယ် နဲကွဲကျောင်းကို ပွတ်ပေးနေရင်း က အပေါက်နာက်နားရောက်တော့ အသာလေးဖိချလိုက်တယ် . ချော ဆီလို အရည်လေးတွေက စိုနေတော့ အသာ တကြည်ဝင်သွားတယ်။ကျနော့် ပါးစပ်ရော လက်ရောအလုပ်ရှုပ်နေသည်။ လက်ခလယ်နဲ စောက်ဖုတ်လေးကိုမွှေရင်း လက်ညှိုးနှင့်လက်မ ကသူ့စောက်စိလေးကိုချေပေးလိုက်တော့… “အား..အင့် ..ဟဲ ..အဲ…“ ကောင်မလေးထံမှအသံပေါင်းစုံထွက်လာသည်။ ကျနော် ခပ်သွက်သွက်လေး အသွင်းအထုပ်လုပ်ေးနေရင်း ပါးစပ်ကလဲ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပြင်းပြင်းလေးစို့ပေးလိုက်တယ်။“ဟဲ ….အား..ဟင့်..အီး…အိုး“ “ကိုကြီး …ဟာ ….အာ…..နင့် …..အာ…….“ ညည်သံတွေနဲအတူ လက်ကလဲကျနော်လီးကို အာမလိုအားမရဖြစ်ပြီး ဖြစ်ညှစ်ကိုင်နေသည်။ “နင် ကောင်းနေပြီလားဟင် ကောင်မလေး“ ကျနော် နို့စို့တာ ရပ်ပြီးမေးလိုက်တယ် “ဟာ ကိုကြီးကလဲ. “ဆိုပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲသွားတယ်… မရှက်ဘဲ နေနိုင်ရိုးလား. စေါက်ဖုတ်ရဲရဲ. နုနုထွတ်လေးကို ကလိရင်း အမေးခံလိုက်ရတာကိုး. “ဘာလုပ်မှာလဲ“ လို့ကျနော် ကို ရှက်ကို့ရှက်ကမ်းနဲ့ ပြန်မေးတယ်. ကျွန်တော်လဲ..“လိုးကြမှာလေ လိုးကြမှာ“ လို့ခပ်ရွဲရွဲသံနဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ကျနော် သူ့စောက်ဖုတ် ကို့ပွတ်နေတဲ လက်ကိုသာသာလေးဆွဲထုပ်ပြီး နို့စို့တာပါရပ်လိုက်သည်။ ကောင်မလေးမျက်နှာကိုကြည်လိုက်တော့ မချိုမချည် ပြုံးစိစိနဲကျနော်ကိုပြန်ကြည်တယ်ကျနော် သူပေါင်ကြားထဲဝင်ဖို့ပြင်တော့ ကျနော့်လီးကိုကိုင်ထားတဲသူလက်ကလေးလွှတ်ပြီး ပေါင်ဖြဲပေးတယ်။
“ဖြေးဖြေးနော်…သမီးကြောက်လို့.“ “အေးပါဟ ငါသိပါတယ်“လို့ပြန်ပြောရင်း ကျနော်လီးနဲ သူ့စောက်ဖုတ် ကွဲကြောင်းလေးကို အပေါ်အောက် ပွတ်ပေးနေတယ်။ပါးစပ်က သူ့နို့သီးလေးတွေကို ကုံးစို့ရင်းပေါ့။ “အာ…….ထည့်လိုက်တော့လေ“ သူမရိုးမရွဖြစ်နေပုံရသည်။ကျနော် ပွတ်ပေးနေတာရပ်လိုက်ပြီး အပေါက်နားတည့် ထားတော့ သူလက်ကလေးနဲ တည့်အောင်တေ့ပေးတယ်။ “ဖြေးဖြေးလေးထိုးထည့်လိုက်“ကျနော့်လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲတည့်အောင် ကိုင်ပေးရင်း ပြောတယ် ကျနော် ခါးကို ဖြေးဖြေးချင်းကော့ပြီး ညင်ညင်သာသာလေးထိုးထည့်လိုက်သည်။အရည်အနည့်ငယ်ရှိနေ သဖြင့် ချောချော ချူချူဝင်သွားသော်လဲ စည်းပိုင်ပြီးကြပ်နေသည်။“အား …………. နာတယ်“ “ဖြေးဖြေးလုပ် ပါဆို“ နှူတ်ခမ်းလေး ဆူပြီး ပြန်ပြောတယ်. “အေးပါဟ“ “ငါဖြေးဖြေးလေးသွင်းတာပါ“လို့ပြောရင် ခဏရပ်ထားလိုက်သည်။ “ဘယ်လိုနေသေးလဲဟင်“ “ငါဆက်သွင်းလိုက်မယ်လေ ခလေး“ သူပေါင်ကိုအစွမ်းကုန်ကားပြီး “အင်း“ ဟုမသက်မသာပုံနဲပြန်ပြောတယ်။ ကျနော် တပ်နိုင်သလောက်ငြင်ငြင်သာသာ လေးဆက်ဆက်သွင်းလိုက်တယ် ဆုံးသွားတော့ ခဏလေးငြိမ်ပြီးနားလိုက်တယ် ။ကောင်မလေးအောက်နေလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီး “ဘာလို့ ရပ်ထားတာလဲ“သူစိတ်မရှည်တဲလေသံလေးနဲပြောတယ်။
“အေးပါခလေးရယ်. နင်နာမှာ ဆိုးလို့ပါ“ လို့ပြန်ပြောရင်းကျနော် အသာအရာ အသွင်းအထုပ်လေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလဲ အောက်ကနေ စီးချက်နဲအတူ လိုက်လှုပ်ရှားပေးတယ်လေ။နောက်တော့ နဲနဲလေးမြန်လာကြတယ် အီး…အား….နဲ ညီးသံလေးတွေလဲပြိုင်တူနီးပါးထွက်လာကြတယ်။ ကျနော်ရင်ထဲပြောပြလို့မရတဲ ခံစားမှုပေါင်းစုံ ရောက်နေသည်။ခုငါ လိုး နေတာ မှန်လေး ပါလား ဆိုတဲအသိနဲပေါ့ အ၀င်အထွက်ကတော်တော်လေးမြန်လာကြတယ် “ကိုကြီး. ဆောင့်ချင်သလောက်ဆောင့်နော်“ “သမီး ခံနိုင်ပြီ.“ လို့ညည်သံကြားကအားပေးတယ်။ကျနော်လဲ အားရပါးရဆောင့် သူကလဲအောက်ကနေ အားရပါးရနဲ ကော့ကော့ပေးတော့ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး “အီး….အား……မရပ်နဲနော် …ဆောင့် ….အင်……….ဟင်း……..“ဆိုပြီး ကျနော်ဖင်ကိုသူ့လက်နဲအတင်းဆွဲဆွဲဆောင့်တယ်။ကနော်လဲ သူပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးခပ်ပြင်းပြင်း မနားတမ်း ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေး လိုက်တာ ကျနော်ပါပြီးချင်လာတယ်။ “အာ……“ “ကောင်းလိုက်တာ“ “ဆောင့်ကိုကြီး ဆေါင့်. ဆေါင့် အရမ်းနဲ့ဆေါင့် လို့ အော်ရင်း“ ဟုပြောနေရင်က သူငြိမ်ကြသွားတယ်။ကျနော်လဲ သူပြီးပြီဆိုတော့ အောင့်ထားတာလွှတ်လိုက်ပြီး လေးငါးဆယ်ချက် ဆက်တိုက် ဆက်ဆောင့်ပေးလိုက်တာ ကျနော်လဲထွက်ကုန်ရော။ လက်ကျန်အရှိန်လေးနဲ မှေးပြီး ဆက်ဆောင့်နေလိုက်သေးတယ် ။ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာတော့ “အင့် ….အင့် “အောက်က ကော့ပေးရှာပါတယ် ကျနော် ရောသူပါ မောသွားပြီး ခဏမှေးနေလိုက်တယ်ကျနော့်လီးကတော့ သူ့ဆောက်ဖုတ် ထဲစိမ်လို့ပေါ့……….
အကြံ ပိုင် တဲ့ ဖိုးတုတ်